रियल सिटिओ र भिल्ला डे अरन्जुएजका लेखकहरूको अन्य books पुस्तकहरू। दोस्रो वितरण | वर्तमान साहित्य
अघिल्लो महिना प्रस्तुत6लेखकहरुलाई मेरो निवास शहरको, रोयल साइट र विला डी अरानजुज। मसंग थियो अन्य6एक दर्जन पूरा गर्न मूल नाम र / वा प्रभावहरू यो सुन्दर enclave को दक्षिण को मैड्रिड को समुदाय को। तपाईं एक पैदल लिन को लागी आमन्त्रित गरिएको छ वा यी कथाहरू यी कथाहरूको धन्यवाद खोज्न। हेरौं
1 Aranjuez मित्र र अनुपस्थिति बीच - एन्टोनियो गैलेगो बुन्डेडा
2 शहरमा बेदौइन - जेभियर सान्चेज-अल्माजन
3 टेम्प्लरको लहर - लोरेन्जो अराना अगुडो
4 भाग्य को मूल्य - अरमान्डो स्यान्टियागो जिमनेज
5 खरानी बिउ - लुइस मोरेनो र जेसस वाल्बुना
6 आधा रक्त सपना - Farramuntana
Aranjuez साथी र अनुपस्थिति बीच - एन्टोनियो गैलेगो Buendía
हामी यसबाट सुरू गर्दछौं कविता यस लेखकको, जो साइल्समा जन्मे र जो बचपनमा अरनजुएज आए। यो पुस्तक तीन भागमा विभाजित छ: I Aranjuez र यसको वरपर, जहाँ कविता प्रेरणा उनको बाट आउँछ रुचि, तपाईंको साथीहरू र परिदृश्य त्यो यसको वरिपरि छ। दोस्रो, साथी र अनुपस्थिति बीच, नायकको रूपमा छ परिवार, अधिक साथीहरू र अन्य सम्झनाहरु। र अन्तमा, मेरो नातिनातिनाहरुलाई.
शहर मा बेडविन - जेभियर सान्चेज - अल्माजन
Este राष्ट्रिय विज्ञान संग्रहालयको invertebrate संग्रह को क्यूरेटर कथाहरूको पुस्तक प्रकाशित गरिसक्यो: बुढा मान्छे, उल्लू र केट पतंग र अन्य कथाहरू सहित २०१ 2013 मा, र २०१ novel मा यो उपन्यास।
हामीलाई कथा बताउँछ गब्रिएल, एक युवा जो म्याड्रिडमा बस्छन्, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय र कल्पनाहरूमा काम गर्दछन् साहित्यिक कारनाम दुई साथीहरू, स्कार र कर्टोको साथ। गेब्रियल एक छ एक वृद्ध महिला संग सम्बन्ध उहाँसँग जो सँगै बस्न दबाब दिन्छ। त्यसैले उहाँ कहिले काँही आफ्नो काका मोन्कोको साथ अरनजुएज जानुहुन्छ।
एक दिन, j मार्फत हिंड्दैआर्डीन्स डेल रियल सिटिओ, गेब्रियल एक फेंक गर्न को लागी हुन्छ बोतल भित्र सन्देश ट्यागसको पानीमा। त्यो सन्देश प्राप्तकर्तामा पुग्नेछ, एकै क्षणमा ठूला परिवर्तनहरू गब्रिएलको जीवनमा यसको अर्थ पनि हुनेछ नयाँ एनकाउन्टरहरू.
टेम्पलरको लुगा - लोरेन्जो Arana Agudo
Aana Agudo हो बेसिन र त्यहाँ उनले शिक्षण पढे, तर यो भन्दा बढी लिन्छ अरन्जुएजमा तीस वर्ष.
प्रकाशित भएको छ चार पुस्तकहरु कविता को पहिलो दुई: भावना र सोचeजीवनको भाँडादार। तेस्रो, रहस्यमय रोमान्सयो कुन्कामा सेट गरिएको रोमान्समा लेखिएका दस किंवदन्तीहरू मिलेर बनेको छ। चौथा, भगवान र तपाइँको सेवा गर्न, साठको दशकमा सेट गरिएको छ, गद्यमा छ र शिष्टाचार टोन छ।
पछि हामी भित्र छौं Toledo, कता प्रेम र तेर्रौं वर्षका दुई जवान पुरुषहरूको हृदय विदारक कहानी वर्तमान आर्थिक संकटको सन्दर्भमा। त्यसैले राजनीतिक र दार्शनिक प्रतिबिम्बहरू प्रेम मानिसहरूसँग परिवर्तन गरिएका छन्।
भाग्य को मूल्य - अरमान्डो स्यान्टियागो जिमनेज
सान्टियागो जिमनेज १ 1964 .XNUMX मा अरनजुएजमा जन्मिएका थिए र एक इलेक्ट्रोनिक टेक्निकल इञ्जिनियर छन्। मा उनको काम को लागी इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी, र विज्ञानको उनको प्रेम, यो पुस्तक लेख्न प्रोत्साहित गरियो।
त्यसैले उसले हामीलाई उहाँबारे सोध्यो किन राम्रो वा नराम्रो। र के हुन सक्छ यदि केहि कम्पनीले पर्याप्त प्राविधिक र वैज्ञानिक संसाधनहरूको साथ पत्ता लगायो कि त्यस भाग्यमा कसरी नियन्त्रण गर्ने? नायक यस कथा को लागी हुनेछ एक शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय लडाई एल्गोरिदममा विशेषज्ञ र उही कुराको दावी गर्ने, विज्ञान, नैतिकता र धर्ममा नियन्त्रण।
खरानी दाना - लुइस मोरेनो र जेसस वाल्बुना
लुइस Moreno es कवि र पनि उपन्यासकार। उसले कविता पुस्तक प्रकाशित गरेको छ पानीको सुई र उपन्यासहरू हामी फेरि साहसी हुनेछौं y तुफानलाई परिभाषित गर्दै। र येशू Valbuena पन्ध्र बर्ष जस्तो भयो अवधि समुद्री म्याड्रिडको दक्षिणमा, दुबै लिखित प्रेस र एजेन्सीहरू वा रेडियोमा।
यो तिम्रो हो दोस्रो संयुक्त काम। गत फेब्रुअरीमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए र यो उपन्यास हो कालो लिंग एक दमनकारी मा सेट किशोर केन्द्र। एक दिन ती मध्ये एक हराउँछ अनौठो परिस्थिति किनकि कोही पनि कुनै पनि प्रकारको ट्रेस छोडे बिना हराउन सक्दैन। दुई कर्मचारी सदस्यहरूले वास्तवमै के भयो भनेर पत्ता लगाउन कोशिस गर्नेछन्।
मेस्टिजो सपना - Farramuntana
यो हो दोस्रो पुस्तक रसायनशास्त्रीबाट जुआन कार्लोस रोड्रिग्ज, राम्रो Farramuntana को रूप मा परिचित पहिलो थियो रिपेरियन, आफ्नो आमा संग ताल मा लेखिएको। एक हो परिवार गाथा पाँच पिढिहरूको फराकिलो अवधि जहाँ एक विशेष चरित्र बाहिर खडा हुन्छ, अंकल क्यालोरस। यो, जुन त्यसपछि हो, t बाट बनेको छपुन: कथाहरू.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » रोयल साइट र विला डे अरन्जुएजका लेखकहरूद्वारा थप6पुस्तकहरू। दोस्रो किस्ता
जोस एन्जेल ओरगाज तोरेस भन्यो
एक तिहाई हराइरहेको छ। त्यहाँ धेरै लेखकहरू छन्, जसमध्ये म म हुँ, जसले उनीहरूका पाठहरू प्रयोग गरेर हाम्रो अनौंठो व्यक्तिलाई बढी अर्थ दिन सम्भव भएमा योगदान पुर्‍याउँछन्।
जोसे एन्जल ओर्गाज तोरेसलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, जोसे एन्जल। हो, यो सत्य हो, त्यहाँ अरु धेरै छन्। तर मैले यो लेख धेरै पहिले लेखेको थिएँ र कहिलेकाँही लेखकहरू हामीलाई पास गर्छन्। हेर्नुहोस् कि म तेस्रो किस्ता गर्न सक्दछु। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद।
यी संसारमा सब भन्दा धेरै भुक्तान गर्ने लेखक हुन्